သမိုင်းတစ်လျှောက် အာရှမြေမှာ ပထမဆုံး ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၇)
28 Jun 2018 . 9:34 PM
အာရှတိုက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်သလို ပထမဆုံးအကြိမ် (၂)နိုင်ငံ ပူးတွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်။ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ကို တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့က ရရှိခဲ့ပြီး ခြေစစ်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၉)နိုင်ငံအထိ ရှိခဲ့တယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်အသင်း အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာတင် ပထမဆုံးအကြိမ် ခြေစစ်ပွဲအောင်လာတဲ့ အာဖရိကတိုက်က ဆီနီဂေါအသင်းကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အုပ်စုပွဲစဉ်တွေ အကုန်လုံး ကစားပြီးမှာတော့ ရမှတ် (၁)မှတ်သာ ရရှိကာ အုပ်စုအဆင့်ကနေ အရှက်တကွဲ ထွက်ခွာခဲ့ရတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းအနေနဲ့ အုပ်စုအဆင့်ကနေ ပထမဆုံးထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးကိုရရှိခဲ့တယ်။
ပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ (၂)နိုင်ငံမှာ ဂျပန်အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေဟာ မျှတခဲ့ပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားအသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကတော့ အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်။ နာမည်ကြီး အီတလီအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အီကွေဒေါကွင်းလယ်ဒိုင် မော်ရီနိုရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် တောင်ကိုရီးယားအသင်း ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သလို ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာလည်း အငြင်းပွားဖွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တချို့နဲ့ စပိန်အသင်းကို ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရော်နယ်လ်ဒင်ဟိုရဲ့ နာမည်ကျော် ဖရီးကစ်ကန်ချက်ကြောင့် အင်္ဂလန်တို့ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတော့ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျာမနီ၊ ဘရာဇီးလ်နဲ့ တူရကီအသင်းတွေ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဂျာမနီ၊ ဘရာဇီးလ်နဲ့ တူရကီတို့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဂျာမနီအသင်းကို တောင်ကိုရီးယားတို့ မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့ တတိယလုပွဲနဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။ ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့ တူရကီအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ ဘရာဇီးလ်အသင်းက (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ ဘရာဇီးလ်အသင်းက တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ သွင်းဂိုး (၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး (၅)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ တတိယနေရာလုပွဲအဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့ တူရကီအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ တူရကီအသင်းက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး တတိယနေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ တောင်ကိုရီးယားအသင်းဟာ အာရှကိုယ်စားပြုအသင်းတွေထဲမှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ပထမဆုံး တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အာရှကိုယ်စားပြုအသင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၈)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Host Countries – Japan, South Korea
Dates – 31 May – 30 June
Venue(s) – 20 (in 20 host cities)
Champions – Brazil (5th title)
Runners-Up – Germany
Third Place – Turkey
Fourth Place – South Korea
Goals Scored – 161 (2.52 per match)
Attendance – 2,705,197 (42,269 per match)
Top Scorer(s) – Brazil Ronaldo (8 goals)
Best Player – Oliver Kahn (Germany)
Best Young Player – Landon Donovan (United States)
Best Goalkeeper – Oliver Kahn (Germany)
Fair Play Award – Belgium
Photo:ESPN, Bleacher Report, ChimpSports, Seafoodnet
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၇)
အာရှတိုကျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈသလို ပထမဆုံးအကွိမျ (၂)နိုငျငံ ပူးတှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျးဖွဈတယျ။ အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ကို တောငျကိုရီးယားနဲ့ ဂပြနျနိုငျငံတို့က ရရှိခဲ့ပွီး ခွစေဈပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတဲ့ နိုငျငံပေါငျး (၁၉၉)နိုငျငံအထိ ရှိခဲ့တယျ။ လကျရှိခနျြပီယံပွငျသဈအသငျး အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမှာတငျ ပထမဆုံးအကွိမျ ခွစေဈပှဲအောငျလာတဲ့ အာဖရိကတိုကျက ဆီနီဂေါအသငျးကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အုပျစုပှဲစဉျတှေ အကုနျလုံး ကစားပွီးမှာတော့ ရမှတျ (၁)မှတျသာ ရရှိကာ အုပျစုအဆငျ့ကနေ အရှကျတကှဲ ထှကျခှာခဲ့ရတယျ။ ပွငျသဈအသငျးအနနေဲ့ အုပျစုအဆငျ့ကနေ ပထမဆုံးထှကျခှာခဲ့ရတဲ့ လကျရှိခနျြပီယံအသငျးဆိုတဲ့ မှတျတမျးဆိုးကိုရရှိခဲ့တယျ။
ပူးတှဲအိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခဲ့တဲ့ နိုငျငံ (၂)နိုငျငံမှာ ဂပြနျအသငျးရဲ့ ပှဲစဉျတှဟော မြှတခဲ့ပမေယျ့ တောငျကိုရီးယားအသငျးရဲ့ ပှဲစဉျတှကေတော့ အငွငျးပှားဖှယျ ဆုံးဖွတျခကျြတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနခေဲ့တယျ။ နာမညျကွီး အီတလီအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျကို ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ အီကှဒေေါကှငျးလယျဒိုငျ မျောရီနိုရဲ့ အငွငျးပှားဖှယျ ဆုံးဖွတျခကျြတှကွေောငျ့ တောငျကိုရီးယားအသငျး ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့သလို ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့မှာလညျး အငွငျးပှားဖှယျဆုံးဖွတျခကျြတခြို့နဲ့ စပိနျအသငျးကို ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျမှာ အနိုငျယူနိုငျခဲ့တယျ။ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ နာမညျကွီး အင်ျဂလနျအသငျးနဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးတို့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ရျောနယျလျဒငျဟိုရဲ့ နာမညျကြျော ဖရီးကဈကနျခကျြကွောငျ့ အင်ျဂလနျတို့ အိမျပွနျခဲ့ရတယျ။ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကိုတော့ တောငျကိုရီးယား၊ ဂြာမနီ၊ ဘရာဇီးလျနဲ့ တူရကီအသငျးတှေ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး တောငျကိုရီးယားနဲ့ ဂြာမနီ၊ ဘရာဇီးလျနဲ့ တူရကီတို့ တှဆေုံ့ခဲ့တယျ။ ဒီတဈကွိမျမှာတော့ ဂြာမနီအသငျးကို တောငျကိုရီးယားတို့ မကြျောဖွတျနိုငျခဲ့လို့ တတိယလုပှဲနဲ့ပဲ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။ ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့ တူရကီအသငျးတို့ရဲ့ ပှဲစဉျမှာတော့ ဘရာဇီးလျအသငျးက (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရပွီး နောကျဆုံးဗိုလျလုပှဲကို တကျရောကျနိုငျခဲ့တယျ။
နောကျဆုံးဗိုလျလုပှဲအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးတို့ရဲ့ ပှဲစဉျမှာတော့ ဘရာဇီးလျအသငျးက တိုကျစဈမှူး ရျောနယျလျဒိုရဲ့ သှငျးဂိုး (၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး (၅)ကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ တတိယနရောလုပှဲအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ အိမျရှငျတောငျကိုရီးယားအသငျးနဲ့ တူရကီအသငျးတို့ရဲ့ ပှဲစဉျမှာတော့ တူရကီအသငျးက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရပွီး တတိယနရောကို ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ တောငျကိုရီးယားအသငျးဟာ အာရှကိုယျစားပွုအသငျးတှထေဲမှာ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို ပထမဆုံး တကျရောကျနိုငျခဲ့တဲ့ အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့သလို ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ အအောငျမွငျဆုံး အာရှကိုယျစားပွုအသငျးလညျး ဖွဈခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၈)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ